Kumuu Ahaa Laacibkii Ay Manchester United U Xil-saartay Curyaaminta Mohamed Salah, Muxuuse Tababare Solskjaer Ka Yidhi? – Cadalool.com
Kumuu Ahaa Laacibkii Ay Manchester United U Xil-saartay Curyaaminta Mohamed Salah, Muxuuse Tababare Solskjaer Ka Yidhi?
Manchester United ayaa shalay garoonkeeda barbar-dhac Old Trafford goolal la’aan ah kula gashay Liverpool, taas oo sabab u noqotay in Arsenal ay booska kaalinta afraad kala baxdo Red Devils, halka Reds dhibicda ay ka hesh kulanka ay dib ugula soo noqotay hoggaanka horyaalka Premier League oo ay Manchester City si kumeelgaadh ah u haysay.
Kulankan waxa maqane jooga ciyaarta ka ahaa xiddiga reer Masar ee hoggaaminaya gool-dhalinta Liverpool ee Mohamed Salah, kaas oo dhadhaqaaqiisa si adag loo xakameeyey.
Mo Salah oo xili ciyaareedkii hore u dhaliyey kooxdiisa 44 gool, isla markaana ku guuleystay ciyaartoyga ugu wanaagsan dalka Ingiriiska ayaan wax saamayn ah ku yeelanin kulankan, waxaanay taasi keentay in lagu beddelo Origi qaybtii labaad.
Daqiiqaddii 31aad waxa Liverpool ka dhaawacmay weeraryahanka reer Brazil ee Roberto Firmino, waxaanay taasi keentay in uu culays badan fuulo Mohamed Salah oo difaacyahannada United ee markii hore kaga mashquulayey Firmino ay awooddooda iskugu geeyaan Salah iyo Sadio Mane oo isagana dhaqdhaqaaqiisu yara.
Qorshihii xakamaynta ciyaartoyga Liverpool ee tababare Ole Gunnar Solskjaer uu kusoo galay garoonka ayaa isbeddelay markii ay qaybtii hore ka dhaawacmeen Herrera, Juan Mata iyo Jesse Lingard, kuwaas oo uu boosaskooda kusoo beddelay ciyaartooyo uu farriin cusub usoo dhiibay markii ay garoonka soo galayeen.
Sidoo kale, waxa United dhaawac kaga maqnaa ciyaartan kubbad-burburiyaha reer Serbia ee Nemanja Matic oo ku dhaawacmay tababarkii ay kooxdu iskugu diyaarinaysay kulanka Liverpool.
Tababare Ole Gunnar Solskjaer ayaa waxa uu ka hor ciyaarta sii dejiyey qorshe lagu xakamaynayo weerarka Liverpool, gaar ahaan Mohamed Salah, waxaanu u xilsaaray hal ciyaartoy oo si buuxda uga soo baxay shaqadii loo diray.
Difaaca bidix ee Luka Shaw ayaa uu tababaruhu u diray inuu si adag u qabto Salah oo aanu marnaba fursad siinin, isla markaana uu raaco haddii uu uga yara ruqaansado dhinaca midigta.
Markii ay ciyaartu dhamaatay, ayey warbaahintu weydiisay tababare Ole Gunnar Solskjaer, sidii uu u xakameeyey Mohamed Salah, waxaanu yidhi: “Scott McTominay ayaa heer sare ahaa. Marka aad u baahan tahay gool ee aad bakhtiinayso Mohamed Salah waxaad ogtahay in Luke Shaw uu si wanaagsan u ciyaaray.”